Edlulisa ukuphepha komlilo amaphuzu, abantu abaningi noma ucabange izindlela namathuluzi ezisesandleni ibhokisi leposi ezicwebezelisiwe obomvu ne inombolo yocingo service umlilo. ikhithi Standard kufaka hose, imbazo, Isigaxa ebhakedeni, lokwela, futhi ngezinye izikhathi esitsheni isihlabathi. Kubuka izimfanelo idatha, abantu abadlula, futhi kuphela isimangaliso ukwazi kakhulu kungani umlilo ebhakedeni kuyinto oyindilinga.
Kuyinto Umbuzo othakazelisayo ngempela, kuwo kukhona izimpendulo ezahlukene. Kodwa ngamunye wabo endaweni ngesizathu esisodwa esilula - bona esasebenza nanamuhla. Lapho ngezigaba ezinkingeni zonke izimpendulo zingahlukaniswa zibe lezi zinhlobo ezilandelayo: izincazelo, ezihlobene nomlilo ukuphepha, ingxenye ukukhiqizwa futhi umthengi ngokoqobo.
Ngalokhu umbandela ngokuvamile ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana izizathu ezintathu ngenxa lapho ebhakedeni umlilo kwakheka umumo oyindilinga. Okokuqala, lolu hlobo amabhakede aqede kungenzeka yamanzi wachela. Ngenxa lesi sici design amanzi jet igxile ageleza ukuthi ngesikhathi zokucisha umlilo kuyinto ebalulekile, kanti kwesinye isikhathi kuba okunqumayo. Lapho usebenzisa i ibhakede ezivamile lomphumela awutholakali.
Umbandela wesibili ngenxa amabhakede umlilo ngale ndlela wukuthi ngeke bangathemba, kanye nokusetshenziswa asizayo ekucimeni imililo the nobusika. Tapered ukuma oyindilinga ivumela ngezibhakela imbobo ice ukuthi ubumbe ku ichibi. Isicelo umlilo ebhakedeni ngenhloso nje enjalo ngenxa yokuthi amanzi kampompi noma kahle kungaba ibanga kude kakhulu kusukela umlilo kuka kwesigubhu, nangesikhathi neutralization ukuthungela - lena lunqume.
Okwesithathu, ukudweba amanzi emthonjeni noma ichibi oyindilinga ebhakedeni kuba lula futhi ngokushesha ngoba akusho ukushaya phansi emanzini, futhi ngokushesha angcwatshwe. Futhi kulesi sikhundla efanayo kulula thayipha isihlabathi, ngoba sibonga injalo, kuba ngokuqinile kwezandla engenzi ehamba. Lawa izizathu zokuthi kungani umumo umlilo ibhakede Isigaxa, okusekelwe izidingo kanye lula ukusebenza kwawo ukucima.
Fire ebhakedeni, sentiwe ngendlela oyindilinga, akunakwenzeka ukuba agqoke kwamanzi, it kungenziwa kuphela ukubeka ohlangothini, futhi ngenxa yalokho, i umnotho efana design izici kancane, odinga njengoba ziwagcina lutho akunakwenzeka. Lokhu kusho ukuthi ukweba ukusetshenziswa yabo siqu-product efanayo nalena, kungabikho muntu. Le nkomba, nakuba kubonakala sengathi mancane amathuba kodwa iyafaneleka ngokoqobo ukuphila kwethu, ngakho-ke ungakwazi futhi kwenziwe isibaluli zezizathu ezenza ebhakedeni umlilo oyindilinga.
Lokhu isizathu umsindo Corny, kodwa inqubomgomo ukunciphisa izindleko zokukhiqiza kwenza ukufuna amakhambi elilungile. Ukukhiqizwa amabhakede ukuma oyindilinga ngokwezimali kancane ebizayo isikhathi ukuvele okwenza kuka iziqukathi ezivamile. Futhi ngokuhlanganyela izimbangela zasekhaya nalabo ezihlobene ukusebenza umkhiqizo, okwenza kube bheka amabhakede oyindilinga ezicini zonke elula kakhulu, ethembekile, ukonga futhi zisebenza kahle. Nangu Isizathu sesithathu esenza ibhakede umlilo oyindilinga.
Uma ungayi emahlathini ayisinindolo futhi ezikhathini zasendulo, zonke izimbangela namuhla kubonakala ngempela ozwakalayo. Omunye angase aphikisane lezi zimpikiswano lapha, kodwa empeleni iqiniso wukuthi kumele kubhekwe ekubhekaneni zonke izindaba, kuhlanganise nalawo ahlobene umlilo ebhakedeni.
Lapho ukuya Sochi: izikhangibavakashi, ukuzijabulisa. Lapho ukuya Sochi izivakashi nezingane
Hasidi Umani. Kungani amaHasidi eya eMan?
Amathiphu wokuthi ungenza kanjani i-antenna ye-TV yakho
Itiye "Amandla utshani Russian" - usizo yemvelo ekulweni impilo